Siiqqota taattoo keessaa ti agarsiifamman ifteessi.
Saagi - Siiqqota (Taattoota) fili
Siiqqee X akka sarara qooda ti agarsiisi.
Siiqqee Y akka sarara qooda ti agarsiisi.
Siiqqee Z akka sarara qooda ti agarsiisi. Siiqqeen kun kan inni agarsiifammu garsadee taattoo keessa ti.
Siiqqee lammataa taattoo kee kessaa ti ramaduf idoo kan fayyadami. Yoo walfaanneen deetaa siiqqee kana ti ramadamerra ta'e, LibreOffice Siiqqee fi moggaasa ofumaan agarsiisa. Qindaa'ina kana booda dhaamsuu dandeesa. Yoo deetaan siiqqee kanati ramadamee hin jiru ta'e fi idoo kana kakaasi, Gatiin siiqqee Y dursaa gara siiqqee lammataa ti fayyadami.
Siiqqee X lammataa taattoo kessaa jiru agarsiisi.
Siiqqee Y lammataa taattoo keessaa jiru agarsiisi.
Siiqqee buraalaa fi siiqqeen lammataa safaraa ada adda qabu. Fakkeenya fi, safaraa siiqqee tokkoo inchii 2. fi kan birra ti safaraa inchii 1.5.
Title is: Siiqqota